म सलमान खान सँग बिहे गर्न चाहन्छुँ : नायिका सुस्मा कार्की (भिडियो हेर्नुहोस्)
June 8, 2020 2904
नेपाली मिडियामा बेला बेला चर्चामा आइरहने नाम हो सुस्मा कार्की । हट एण्ड ग्याल्यम’र्सका कारणले नायिका कार्कीको बेला बेलामा चर्चा हुने गर्दछ । नायिका कार्की’काे जन्म ५ सेप्टेम्बरमा १९९२ बर्दियामा भएकाे हाे ।
मोडलिङबाट करियर सुरू गरेकी का’र्कीले चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी छ’बाट चलचित्रमा डेभ्यू गरेकी हुन् । नायिका कार्की ब्लकबस्टर चल’चित्र लुटको एउटा आइटम गित ‘उध्रेको चोली’ गीतमा आइ’टम नित्य गरेर चर्चामा आएकी थिइन् ।
सुस्मालाई दर्शकले नायिका भन्दा पनि आइट’म गर्लको रुपमा रुचाउछन् । उनले बिन्दास, बिन्दास २,बाउन्सर, लुट र सालि कस्को भेनाकाे लगा’यत चलचित्रमा अ’भिनय गरिसकेकी छिन् । उनी सुन्दरता, गेटअप र ट्याटुका कारणले चर्चामा आइरहन्छिन् ।
नायिका कार्की आजभोली फेरि टिकटक र सामाजिक सञ्जाल’मा छाएकी छिन् । उनले युट्युब अन’लाइन र टेलिभिजनमा दिएको पुरानो अन्तर्वार्ता’को बिषयलाई लिएर उनलाई गाली गर्नेको लर्को लागेको छ । नायिका कार्कीले केही अन्तर्वाता’मा अन्य नायक नायिकाहरुको बारेमा नराम्रो बोलेको भन्दै गाली गरेको देखिन्छ ।
तर, उनले यस बिषयमा सञ्जाल’बाटै स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्, उनि लेख्छिन्, ‘दुई बर्ष पुरानो अन्तर्वाता’लाई लिएर नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न अनुरोध गर्दछुँ अहिले मेरो सबैसँग राम्रो सम्बन्ध छ।’ना’यिका सुष्मा कार्कीले आफूलाई बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खान मन पर्ने भएकोले उनैसँग विवाह गर्ने चाहना व्यक्त गरेकी छिन् ।
शनिबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजन’बाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले आफूलाई सल’मान खानबाहेक अरु कोहीपनि मन नपर्ने स्पष्ट पारिन् । भिडि’यो हेर्नुहोस….
Prevआज जेठ २६ गते सोमबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्..
Nextआज डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ यस्तो छ: हेर्नुहोस्
अब दलालमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्न प्रतिबन्ध ! सरकारको यस्तो तयारी
६० वर्षकी वेहुली २० वर्षका वेहुला, १ मिसकलले जुराएको यो जोडी, धुमधामसँग विवाह
विश्वभर फेसबुक म्यासेन्जरमा स’मस्या देखियो